Waqtigee ayay dhici kartaa daahitaanka hadalka ee carruurta? | Bezzia
Waqtigee ayay dhici kartaa daahitaanka hadalka ee carruurta?
Maria Jose Roldan | 04/06/2022 13:28 | Dhallaanka
Mid ka mid ah waqtiyada aadka loo filayo ee waalidku waa marka ilmuhu wuu awoodaa inuu af-gambiyo oo uu ku hadlo ereyadiisa ugu horreeya. Si kastaba ha ahaatee, ilmo kastaa wuu ka duwan yahay waxaana jiri doona qaar marka ay timaaddo aad uga sii horraysa marka ay timaado hadalka iyo qaar kale oo waqtigu ku adag yahay. Isbarbardhigga waa mid ka mid ah khaladaadka ugu weyn ee waalidku sameeyo, gaar ahaan marka ay timaado horumarinta luqadda.
Ha ku mashquulin haba yaraatee mawduuca hadalka ee samir ilaa wakhtigaasi ka yimaado. Maqaalka soo socda waxaan kuu sheegaynaa marka ilmuhu bilaabo inuu hadlo iyo goorma ayaa laga yaabaa in uu dib u dhac ku yimaado hadalka.
1 Cunug walba waa ka duwan yahay
2 Waqtigee ayay dhici kartaa dib u dhac luqadeed?
3 Sida ilmaha looga caawiyo horumarinta luqadda
Cunug walba waa ka duwan yahay
Marka laga hadlayo horumarinta luqadda, waa in la sheegaa in ilmo kastaa uu ka duwan yahay oo u baahan yahay hab u gaar ah marka uu hadlayo. Dib u dhaca hadalka ayaa dhaca marka la yiraahdo korriinka luqaddu kuma habboona da'da ilmaha.
Si guud, waxaa la dhihi karaa ilmuhu wuxuu bilaabaa inuu ku dhawaaqo ereyadiisa ugu horreeya hal sano jir. Marka uu ilmuhu gaadho 18 bilood waa in uu erey-bixintiisa ku yeeshaa ilaa 100 kelmadood, marka uu labada sanno gaadhona eray-bixintiisu waa in ay ballaadhisaa ilaa 600 oo kelmadood. Markay 3 sano jiraan, waa inay sameeyaan jumlado leh saddex walxood oo ay leeyihiin ilaa 1500 oo erey.
Waqtigee ayay dhici kartaa dib u dhac luqadeed?
Waxaa laga yaabaa inay jiri karto xoogaa dhibaato luqadeed markaad laba sano jirtid ma awoodo inuu sameeyo weedho leh laba eray. Waxaa jira calaamado dhowr ah oo muujin kara in uu jiro xoogaa dib u dhac ah oo ku yimaada hadalka, gaar ahaan marka uu jiro 3 sano:
Aan awoodin in uu sameeyo jumlado kaliya waxa uu ku hadlaa dhawaaqyo gooni-gooni ah.
Ma isticmaasho nooc kasta oo soo jeedin ah ama xiriiriye iyo dooro fududaynta dhawaaqa.
Isagu ma awoodo in uu keligiis jumlado abuuro kuwa uu sameeyona waa ku dayasho.
Inta badan dhallaanka hadalka daahda bilaaba, Waxay u janjeeraan inay caadi ka dhigaan afkooda sannadihii la soo dhaafay.
Sida ilmaha looga caawiyo horumarinta luqadda
Waalidiintu waxay bilaabi karaan akhrinta sheekooyinka si ilmuhu si tartiib tartiib ah u barto luqadda.
U diyaari weedho fudud oo ku habboon da'da ilmaha iyo isticmaal maalin kasta.
Way fiicantahay in la magacaabo mar walba falalka kala duwan ee la qabanayo.
si joogto ah ugu celi iyo marar badan maalintii erayo maalin kasta sida guri, sariir, biyo, iwm.
La ciyaar qaar ka mid ah ciyaaraha la xidhiidha ilmaha af ama hadal.
Gaaban, Looma baahna in aad looga welwelo dib u dhac gaar ah oo ku yimaada hadalka carruurta iyo dhallaanka. Ilmo kastaa wuxuu u baahan yahay laxankiisa mana fiicna in lala barbar dhigo kuwa yaryar. Haddii, inkastoo sannado, ilmuhu uu leeyahay xoogaa hadal ah, waa fikrad wanaagsan inaad u tagto takhasusle si meesha looga saaro dhibaato kasta oo si toos ah u faragelinaysa horumarinta luqadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Dhallaanka » Waqtigee ayay dhici kartaa daahitaanka hadalka ee carruurta?
Sida ku noolaanshaha guri qasan ay u saamayso caafimaadkaaga
Hilibka basbaaska leh ee maraqa leh brokoli iyo caano fadhi